खुसिको खबर : भर्खरै ट्रम्पले दिए मोदीलाई धम्की ! – Satya Samachar
Home/ अन्तरास्ट्रिय समाचार/खुसिको खबर : भर्खरै ट्रम्पले दिए मोदीलाई धम्की !
खुसिको खबर : भर्खरै ट्रम्पले दिए मोदीलाई धम्की !
एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धम्की दिएका छन् । ट्रम्पले मोदीलाई कारवाहीको सामना गर्न चेतावनी दिएका हुन् । ट्रम्पले यसअघि पनि भारतमाथि यस्तै किसिमको आरोप लगाइसकेका छन् । पछिल्लो समय ट्रम्पले भारतसँगै चीनलाई समेत अमेरिकी
उत्पादनमा धेरै कर लगाएको आरोप लगाउँदै तत्काल करको दर नघटाए कारवाही भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् । चीनसँग यसअघि नै अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर छैन । पछिल्लो समय भारतलाई पनि ट्रम्पले यस्तो चेतावनी दिएपछि एसियामा अमेरिकाको पकड फितलो हुने अनुमान गरिएको छ ।
ट्रम्पले भारत र चीनलाई अमेरिकी उत्पादनमा कर अमेरिकाको बराबरी गर्न भनेका छन् । यसो नभए अमेरिकाले कारवाही गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्पले भारतीय र चिनिया उत्पादनमा पनि ठूलो मात्रामा कर लगाउने चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्पका अनुसार अमेरिकाले भारतीय र चिनिया उत्पादनमा कर लिँदैन तर यी देशले ठूलो परिमाणमा कर लिएर सम्बन्ध बिगार्न खोजेका छन् ।Dcnepal baat
यिनै अफिसरको हातमा छ तेस्रो विश्वयुद्धको चाबी …हेर्नुहोस् गुआम टापुमा उत्तर कोरियाले कसरी गर्दैछ आक्रमण ?
श्रीमान्–श्रीमती बनेर लिए होटलमा कोठा, बिहान भेटियो युवकको लाश ….